U-Leo Love ukuhambelana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana U-Leo Love ukuhambelana
Abathandi baka-Leo bacingelwa ukuba bahambelana kakhulu ne-Aquarius kwaye ubuncinci buhambelana neCancer. Ukuba luphawu lomlilo oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
Abo bazelwe e-Leo babonisa izinto ezithile xa benxibelelana nolunye uphawu lwe zodiac ezilishumi elinanye kunye neziqu zabo. Nganye yezi zinto zidibeneyo zidibeneyo kufanelekile ukuba zixoxwe ngokwahlukeneyo.
Kwisicatshulwa esilandelayo siza kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kukaLeo kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
Ukuhambelana kweLeo kunye neeAries
leo umfazi kunye nendoda enomhlaza
Ezi zimbini zenza isibini esikhazimlayo nesiqhumayo, umzuzu omnye uncoma omnye nomnye, ukuphikisana okulandelayo. Iinkokeli ezimbini ezinomdla ngokudibeneyo ziqala iiprojekthi ezintsha nezinomdla nokuba zezokuthandana okanye zobungcali.
Ukuhambelana kweLeo kunye neTaurus
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo ongenakwenzeka! Olu dibaniso luhlala luyintaba-mlilo ekulungele ukuqhuma kubangele ukuxhatshazwa kumacala omabini.
Zombini ziyonwabela ulonwabo olulula kodwa ezi zikwindlela eyahlukileyo. Kananjalo, awunakuba neenkokheli ezimbini eziphikisanayo ngalo lonke ixesha ngezigqibo ezilula zasekhaya.
Ukuba bayaphumelela ukuzinzisa xa ilixesha lokuba umntu ngamnye alalanise bakwindlela eqinisekileyo yokufumana inzuzo yezinto eziphathekayo.
Ukuhambelana kukaLeo noGemini
Ukuhambelana kukaLeo kunye noMhlaza
Banokonwaba kunye kodwa kufuneka bakhumbule ukuba bahlala behamba kumacala ahlukeneyo. U-Leo kufuneka afunde ukuba novakalelo kunye nokukhathalela kuba yile nto ifunwa ngumhlaza.
leo indoda eyindoda i-aquarius umtshato womfazi
Kwelinye icala uMhlaza kufuneka uqale uhlengahlengiso kwaye ube bhetyebhetye ngakumbi xa kufikwa kwiminqweno kaLeo. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banenkanuko ukuya kwinqanaba elithile.
Ukuhambelana kukaLeo noLeo
Ukuhambelana kweLeo kunye neVirgo
Ukuhambelana kukaLeo kunye neLibra
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo olula! ILibra inayo yonke into eyenziwayo ukuvutha amadangatye kaLeo ngamaxesha afanelekileyo ngelixa uLeo esazi ngqo ukuba uza kubeka phi amandla kwiLibra ezolileyo nebaliweyo.
Ukuhambelana kweLeo neScorpio
Olu phawu lwamanzi kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo ongenakwenzeka! Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lwamanzi lolunye loludibaniso olunamandla. Banokonwaba kunye kodwa kufuneka bakhumbule ukuba bahlala behamba kumacala ahlukeneyo.
Uphawu lomlilo, kufuneka lufunde ukuba novakalelo kunye nokhathalelo kuba yile nto uphawu lwamanzi ngokwenkcazo ludinga. Kwelinye icala iScorpio kufuneka iqale ukuziqhelanisa kwaye iguquguquke ngakumbi xa isiza kwiminqweno kaLeo. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banenkanuko ukuya kwinqanaba elithile.
Ukuhambelana kukaLeo kunye neSagittarius
Ukuhambelana kunye nobuhlobo be-gemini
Ukuhambelana kukaLeo noCapricorn
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! U-Aquarius unayo yonke into ayifunayo ukuvutha amadangatye ka-Leo ngamaxesha afanelekileyo ngelixa u-Leo esazi ngqo ukuba uza kubeka nini amandla kwi-Aquarius ezolileyo nebaliweyo.
ungayiphumelela njani intliziyo yomfazi ofezela
Ukuhambelana kukaLeo kunye nePisces
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongenakwenzeka njengoko uLeo olawulayo engenakho ukwamkela okwexeshana kwaye ngamanye amaxesha yedwa.
Nangona iiPisces ngamanye amaxesha zikulungele ukuthobela iminqweno kaLeo la maxesha anqabile kangangokuba awukwazi ukubona imozulu elungileyo ngaphandle kwesiqhwithi. U-Leo ufuna ukhuseleko kunye nePisces ayisiyiyo eyokuzibophelela ngaphandle kokuba ifumana ingqalelo enkulu kunye nothando.
Igongqongqo laseTaurus: Uncedo lokwenyani lweChina Chinese Zodiac
ndingu mqondiso mni ukuba ndazalwa ngo februwari
umfazi we-taurus othandana nendoda ye-scorpio
Ngaba umntu onomhlaza uyaqhatha
Umfazi wegemini kwigumbi lokulala